Raha tsiahivina, ny 15 desambra lasa teo no niatrika filankevitry ny governemanta farany tamin`ity taona ity tany Mantasoa izy ireo. Mody mihataka ve sa fombafomba fotsiny ? Ny CENI no natokana hisahana ny fifidianana kanefa toa mampiahiahy ihany izao fialan-tsasatra izao. Raha vantanina ny resaka, tsy tompon’andraikitra ny olona toy izany satria aid-dehibe ny fifidianana filoham-pirenena kanefa feno hosoka ity fifidianana filoham-pirenena ity. Niaraha-nahita ny fitanilana nisy tamin`ny fizotry ny fifidianana. Raha hiverenana ny tantara, ny taona 2002, araka ny fanazavan`i Norbert Lala Ratsirahonana dia nitaky ny teo anivon`ny antoko Tiako I Madagasikara hanaovana fampitahana fitanana an-tsoratra kanefa tsy nanaiky ny filoham-pirenena tamin`izany, Didier Ratsiraka, satria ny fetrandro fito andro lazain`ny lalàna no mody nataon`ny fitondrana hevitra ary tsy maintsy nekena ny fito andro hanaovan`ny HCC fanambarana ofisialy. Raha tamin`izany no najanona ka natao ny famerenana fanisana vato dia tsy nisy ny raharaha 2002. Nanamafy i Norbert Lala Ratsirahonana fa raha nisy ny fihodinana faharoa dia lany Ratsiraka satria nitanila ny fitondrana sady ny minisiteran`ny atitany dia mbola teo am-pelatanany. Hitam-poko sy hitam-pirenena fa miharihary ny fitanilana misy eo anivon`ity governemanta ity. Niditra ao anatin`ny fialan-tsasatra ny governemanta kanefa ao anatin`ny vanim-potoana manan-danja eto amin`ny tany sy firenena izao indrindra no mila mampiseho fandraisana andraikitra amin`ny fitandroana ny filaminana.